Home » Creative Writing » ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၃ (အမျက်လေးရယ်တဲ့ ပြေစေလို)
ဝေဠုဝတီ ကို လု ကြ ရာ က
ဂုတ်ပေါ် ဓါးမိုးလုစဲစဲမှာ ဒီလောက်တည်ငြိမ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ အံ့သြော်လို့ မဆုံးပါဘူးဗျာ
တယ်… လက်မ မကောင်း လက်မ
မှန်လှပါ… ထီးဖုရားကြီး လက်ကမြည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း CCTV မှတ်တမ်းများကို ဖေါ်ပြနေပါသည် ဖုရားးးးးးးးးးးး
အနုပညာသည် ငါ သူတပါး ယောကျာ်း မိန်းမအတွက် မဟုတ်…
အနု=အစဉ်လိုက်ခြင်း(ပါ) သို့မဟုတ် အစစ်မဟုတ်ခြင်း(မြန်)
အနု- အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် အကြိမ်ကြိမ်၊ .. တဲ့..။
B. As pref.：（a） General character. anu is freq. as modifying （directional） element with well-defined meaning （“along”），as such also as 1st component of pref.-cpds.，e. g. anu + ā （anvā°），anu + pra （anuppa°），+ pari，+ vi，+ saṁ. — As base，i. e. 2nd part ofapref.-cpd. it is rare and only found in combn sam-anu°.
အင်္ဂလိပ်လို.. Art ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချက်.. တသိန်း…။
ဟုတ်ကဲ့… … သက္တတလိုဆိုရင်တော့ aNu=atom ပါတဲ့။
အနုပဿနာ ဆိုတာရှိသဗျ…။ ၀ိပဿနာရှေ့က.. ဘုရားဟောအစစ်..။
ဟုတ်တယ်။ အနုမြူဆိုတဲ့ စကားကို ခြေခံပွားကြည်မယ်ဆိုရင်လဲ
ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာတွေစာတွေကို ကျွန်တော်တို့လို နောက်လူတွေ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ ဆရာ ဆရာမများရဲ့ ကဏ္ဍက အရမ်းကို ရေးကြီးတာပေါ့။ ဘာမှ မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အသိအလင်းရဖို့ နှလုံးသား နူးညံ့သွားစေဖို့ဆိုတာ ဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အဟော အပြော ပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တာပေါ့လေ။ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာကိုယ်၌က ဒါဟာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်အဖြစ်ပဲ နားလည်နေရင် သင်ယူသူတွေအနေတဲ့ ကဗျာဆိုတာလောက်ပဲ သိနိုင်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်ကြားပေးသူများက ဒါဟာ အနုပညာ ဒီလိုခံစား ဒီလိုတွေ ဒီလိုရေးရတယ်လို့ ရှင်းလင်းပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။